Isbeddellada ku saabsan joojinta ragga, dhammaystirka ugu habboon | Ragga Stylish
Ragga ganaaxa waa kaabis muhiim ah dharka ragga. In kasta oo aysan had iyo jeer moodayn, haddana waxay ku samreen waqti ka dib; Waxay galaan ugana baxaan isbeddellada, laakiin weligood kama tagayaan.
Waxay astaan ​​u yihiin xarrago isla markaana xoojinayaan shakhsiyadda ninka xidhan iyaga. Halkan waxaa ku yaal xoogaa faahfaahin ah oo ku saabsan taariikhda ganaaxa ragga iyo talooyin ku saabsan xirashada.
1 Asalka raga raga shaqada ka joojiya
2 Noocyada raga raga shaqada ka joojiya
4 Faa'iidooyinka ceyrinta ee suunka
5 Muuqaalka caadiga ah ama muuqaalka magaalooyinka
6 Qaar ka mid ah soo jeedimaha muuqaalka leh xargaha
Asalka raga raga shaqada ka joojiya
Ka joojiyayaasha waxaa alifay Albert Thuston magaalada London 1820. Ujeedada dharkan ayaa ahayd in la qabto surwaalka ragga xiran dharka suudhka. Fikraddu waxay ahayd in surwaalku uu ku ekaado meeshiisa, si ay mudaneyaashu u helaan xorriyad badan markay guurayaan.
Halkaas waxay ka noqdeen cunsur lama huraan u ah dharka ragga. Aad baa loo adeegsaday ilaa Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, markii isbedel lagu sameeyay lugta surwaalka; ka dib waxaa lagu beddelay suunka.
Sababta kale ee u joojiyayaashu u joojiyeen adeegsiga waxay ahayd baabi’inta jaakadda. Adiga oo xiranaya jaakada oo kaliya, hakiyaasha ayaa aad u muuqday oo Uma muuqan wax sax ah in dhar loo tixgeliyay inay yihiin nigis la arki karo.
Si kastaba ha noqotee, joojiyayaashu waxay soo mareen waqtiyo soo nooleyn, kuwaas oo ay aad caan ugu ahaayeen. Maalmahan, mar labaad ayey noqdeen kuwo moodo oo dib loo cusbooneysiiyey oo dib loo cusbooneysiiyey si ay uga mid noqdaan dharka labka..
Noocyada raga raga shaqada ka joojiya
Waxaa jira laba nooc oo ganaax ah ragga, waxayna kuxirantahay qaabka xargaha. Waxaa jira dhejisyo qaabeeya X iyo qaabab Y-u eg.
Kuwii hore guud ahaan way ka cidhiidhsan yihiin oo ma aha wax aad loo talin karo in la arko. Taasi waa sababta waxaa fiican in la isticmaalo marka ay labbinayaan jaakadda. Xarkaha Y-qaabeeya waxay leeyihiin xargo ballaadhan waxayna badanaa muujiyaan faahfaahinta qurxinta; waxay ku habboon yihiin in la soo bandhigo oo lagu xidho shaati fudud.
Sida loogu xirayo, sidoo kale waxaa jira laba nooc: oo leh kilibyo ama tuubbo, oo ah xarig dhejiska ku xirxira surwaalka.
Xargaha leh tuubada ayaa ah kuwa ugu dhaqanka iyo xarrago badan. Iyo tan ugu fiican ee la talin karo haddii ay isku darsato dhar rasmi ah oo leh jaakad. Si kastaba ha noqotee, si loo isticmaalo iyaga waxaa lagama maarmaan ah in surwaalku leeyahay badhanno gaar ah oo gudaha ah oo loogu talagalay saameyntan.
Joojiyayaasha leh clip waxaa loo isticmaali karaa nooc kasta oo surwaal ah; tusaalahan ayaa ah taasi waxay ku habboonaan doontaa qaabka caadiga ah. Laakiin waxay leeyihiin khasaaro ah inay macquul tahay inay marba marka ka dambeysa dabacsanaadaan, taas oo dhib badan noqon karta.
Ragga ganaaxa waa in la hagaajiyaa ka hor isticmaal kasta maxaa yeelay surwaal kasta wuxuu u baahan karaa dherer ka duwan. Fikrad ahaan, xargaha ayaa haya surwaalka iyaga oo aan jiidan, si ay u leedahay dhicitaan dhammaystiran.
Shaqada ganaaxyaashu waa inay qabtaan oo aysan adkayn, sidaas darteed waa inuu sidoo kale jiraa meel raaxo leh oo dhexda ah.
Sidoo kale ma xiran kartid laaliyeyaal nooc kasta oo surwaal ah; tallaalada oo dhami kuma habboona. Saraawiil leh dhexdhexaad ilaa dheer ayaa ugu habboon; haddii tallaalka uu hooseeyo, waxaa fiican in la doorto suunka.
Faa'iidooyinka ceyrinta ee suunka
Suumanka suunku badanaa wuu soo ifbahaa taasi waa la arki karaa hoosta jaakada ama jaakada. Xirashada ganaax-bixiyeyaasha ayaa baabi'inaya dhibaatadan.
Ragga shaqada ka joojiya ayaa shaxda dheereeya; Muuqaal ahaan looma kala gooyo laba qaybood sida kiiska suunka. Intaa waxaa dheer, iyagu ma cadaadin caloosha, markaa haddii cunitaanka ka dib uu xoogaa bararo, ma jiri doonto raaxo-darro ama u baahan tahay in mar kale la xakameeyo.
Joojiyayaashu waxay kaloo ka hortagaan surwaalka inay dhaqaaqaan oo ay ka hoos muuqdaan jaakadda ama jaakadda, sida suunka.
Marka laga hadlayo ragga haysta dhowr kiilo oo dheeri ah, laaluushka sidoo kale wuxuu ka faa'iideystaa suunka. Sidaas darteed, iyagu ma abuuraan jeebabkaas aan fiicnayn ee xagga hore ah waxayna u baneeyaan meel u dhexeysa surwaalka iyo shaatiga.
Muuqaalka caadiga ah ama muuqaalka magaalooyinka
Xirashada ganaax-bixiyeyaasha oo leh suud aad u qurux badan oo casri ah waa isbeddel aan waligiis ka bixi doonin qaabka. Waqti kasta oo sanadka ah iyada oo aan loo eegin moodada aan caadiga ahayn, isticmaalka ganaaxyaashu waa mid caadi ah oo lagu dhammaystirayo labis aad u rasmi ah. Qeyb ka mid ah surwaal, jaakad, shaati iyo ganaax-yahanno waa inaan weligood lagu seexan qolka labiskaaga
Muuqaalka noocan ah, waxa ugufiican waa hakiyayaal madow, in kastoo kuwa cadcad sidoo kale la isticmaali karo.
Laakiin Haddii waxa aan dooneyno ay ka sii casrisan yihiin, muuqaal magaaleed badan yihiin, laalayaasha sidoo kale waxay noqon karaan xulafo weyn. Waxaa jira waxoogaa madadaalo ah oo asal ah, aad u dabacsan oo dhalinyaro ah, oo leh midabyo xoog leh.
Haddii ay dhacdo xirashada xarig, midabkiisa waxaa lagu dari karaa midka xarkaha. Haddii kale, suumanka waxaa lagu dari karaa hoos kasta oo shaati ah; sidoo kale kabo ama sharaabaadyo.
Hakinta waa in markaa lagu doortaa iyadoo lagu saleynayo muuqaalka in la baadho. Shaki la'aan waxay u noqon doonaan kaamil dhammaystiran midkood labadan xulasho midkood. Waxay qurxin doonaan shaxanka waxayna u badan tahay inay noqdaan bartamaha dareenka.
Qaar ka mid ah soo jeedimaha muuqaalka leh xargaha
Si aad u muujiso kuwa joojiya maalin kasta waxaan isticmaali karnaa jiinis, funaanad cad oo fudud; waxaan la midoobi doonaa laalilayaasha midabka sharaabaadyada, tusaale ahaan, casaan ama buluug. Waxa muhiimka ahi waa in aan laga badin midabada; si kale haddii loo dhigo, ha ku xad-gudbin tirada codadka la isticmaalay.
Sidoo kale jiinis, waxaad isticmaali kartaa shaati buluug ah oo buluug ah oo cadaan ah, bunni canqaw ah oo maqaar bunni ah iyo ganaaxyaal bunni ah Muuqaal dabacsan ayaa lagu gaari doonaa taabasho ka duwan.
Ikhtiyaar kale oo loogu talagalay muuqaal dabacsan oo leh xargaha waa in la doorto chinos buluug ah; Waxaan ku dari doonaa shaati cad, ganaaxyo madow iyo rootida madow. Muuqaal dabacsan laakiin xarrago leh ayaa la heli doonaa. Chinos cawlan, oo leh shaati buluug khafiif ah, kabo bunni ah iyo kuwa laalay ayaa sidoo kale ah fikrad aad u fiican maalin xafiiska.
Muuqaal xarrago leh laakiin casri ah: waxaad xiran kartaa suudh dhogor cirro leh, shaati cad oo aan xirneyn, casaan-bixiyayaal casaan ah iyo rooti bunni ah. Ama qaab isku mid ah, surwaal dhar madow ah oo leh shaati buluug khafiif ah oo aan lahayn xarig; iyada oo kaabis ah, dhumuc weyn ama la qurxiyay oo la laalaado madow iyo jaakad cawlan.
Haddii fikraddu tahay muuqaal aad loo safeeyey, waxaad dooran kartaa shaati dhar buluug ah oo xariijimo leh; Tan ku dar surwaal dharka madow, hakiyaha casaanka iyo kabaha madow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Dhameystirka » Ragga ganaaxa